Koweit: Aleo ho lò ny voatabia! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Oktobra 2010 20:35 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Nederlands, 한국어, Français, اردو, বাংলা, 繁體中文, 简体中文, English
Lafo avo valo heny amin'ny vidiny tamin'ny iray volana lasa izay ny voatabia any Koweit – ary tsy ataon'ny mponina tsinontsinona izany fiakarana izany. Tsy hitan-dry zareo izay hanazavana ny antony niakaran'ny kesika iray amin'ny vidiny 1 dinar (1,70 dôlara) ho KD4 (14 dôlara) tato anatin'ny andro vitsy monja.
Nandritra ny kabary nataon'ny praiministra tamin'ny solombavambahoaka tsy misy ilana azy dia niala tsiny tamin'ireo fistidihana nataony nanerana ny tany izy ary nilaza fa nitady hevitra hiarovana an'i Koweit sy ny ambin'ny sakafo any amin'i Helodrano ato anatin'ny 15 taona.
Tsapanao ve fa mivadika aminao ny andro ary miferin'aina amin'ny fiakaran'ny vidin'ny anambazaha izahay, tamin'ity taona 2010 ity, ary ny lohalaharana amin'izy rehetra dia ny voatabia?
Ein Bagzee milaza fa tsy olana ny hoe fiakaran'ny vidin'entana, fa ny olana dia ny fomba hiainana izany:
Ny olana dia ny tsy fahalalan'ny mpanjifa ny kodiaran-tsaretin'ny fizotran'ny tsenat iankinan'ny mpivarotra. Tsy afaka hivarotra ny entany amin'ny vidiny mora hitazonany ny mpanjifany ny mpivarotra, satria amin'ny farany dia misy ny fatiantoka ary tsy misy te ho fatiantoka tanteraka izany eo. Te hahalafo daholo ny rehetra ary raha matiantoka iray dinar ny mpivarotra iray androany, dia mety hahazo tombony izy amin'ny manaraka raha misy mpividy mividy KD2 ary toy izany hatrany ny fizotran'ny tsena. Omaly, niakatra ny vidin'ny atody, ary androany dia ny voatabia indray. Rahampitso mety ho ny mofo na ny vary, tsy adino koa ny vokatry ny fambolena any Peshawar – Pakistan – izay potiky ny tondra-drano.
m-vitaminz manontany hoe maninona ny parlemantera no tsy mananga-tanana amin'izao fiakaran'ny vidin'entana izao:
Maninona kay ny mpikambana ao amin'ny parlemantera sy ny mpanohitra no tsy mivory, miady hevitra ary miaraka manohitra ny fiakaran'ny vidin'ny voatabia ? Maninona no tsy ampitahorina ny praiminisitra amin'ny alalan'ny fametrahana aminy fanontaniana ao amin'ny parlemanta mikasika ny fiakaran'ny vidin'entana ? Maninona no tsy apoaka izay nahatonga izao fiakarana izao ary hatsangana ny komitin'ny fanadihadihana?
Ary tahaka ny mahazatra rehefa misy olana any Koweit, dia feno hanihany sy fanehoan-kevitra mikasika ny zavatra resahana foana ny twitter.
Hahazo kesika voatabia maimaim-poana tsirairay avy ny solombavambahoaka hanamarihana ny fiandohan'ny fe-potoana hiasany indray.
ary fayounii manafangaro izany amin'ny fanatanjahantena:
Ny Kuwaiti Football Association (Federasionan'ny Baolina kitra any Koweit) dia nanapa-kevitra fa homena voatabia iray kesika tsirairay ny mpilalao raha maharesy amin'ny fifaninanana.